स्वास्थ्य – America Nepal
Thursday, September, 2017
डा. प्रकाशराज रेग्मी(बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ) १) शाकाहारी खाना प्रयोग गर्न सके सबै भन्दा उत्तम हुन्छ किनकी शाकाहारी खानामा कोलेस्टेरोलको मात्रा अति कम हुन्छ । २) अत्याधिक कोलेस्टेरोल र भएका खाद्य पदार्थहरू जस्तै मासु, कलेजो, मिर्गौला, अण्डाको भित्री पहेंलोभाग, दूध, घ्यू, मख्खन आदि अत्यन्त कम मात्रामा उपयोग गर्ने । चिल्लो पदार्थको प्रयोग आवश्यक पर्दा (सूर्यमुखी, मकै, भटमास,
काठमाडौं । मृगौलासम्बन्धी रोग लागेका मानिसहरुलाई धेरै प्रकारको समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई खाना नपच्ने, लगातार स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाने तथा कमजोर महशुस गर्नु जस्ता समस्या हुन्छन् । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई मृगौलासम्बन्धी रोगको लक्षण र बच्ने उपायबारे जानकारी गराउँदैछौं । लक्षणहरु : मृगौला खराब हुने प्रकियामा मुखमा एक प्रकारको तत्व अमोनिया उत्पादन
५ तथ्य, महिला गर्भनिरोधक चक्किको बारेमा (पिल्स) यौन सम्पर्क पछि गर्भाधारण नहोस भनेर महिलाहरुले प्रयोग गर्ने अस्थाइ परिवार नियोजनका साधन हरु मध्ये सबै भन्दा सुरक्षित र सजिलो गर्भनिरोधक चक्किलाई मानिन्छ। तर सर्बसाधारणमा यसको प्रयोगको बारेमा अन्योल भने रहिरहेको हुनाले सो को निवारण गर्न यो सामाग्रि तयार पारिएको हो । यस्ता कतिपय अन्योलाहरु अन्धबिस्वास मात्र हुन भने अरु चाँही
जुन खानामा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसलाई यदि खाली पेट खाए एसिडिटीजस्ता स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ । त्यसकारण ग्रेटर कैलाश हस्पिटलकी चिफ डाइटिशियन डा. विनिता जयसवाल बिहान खाली पेटमा यस्तो खानेकुरा खाने सल्लाह दिन्छिन् जो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यीमध्ये बदाम (एल्मोन्ड)लाई निकै स्वस्थकर मानिन्छ । भिजाएको बदामलाई दैनिक सेवन गर्दाका पाँच फाइदाबारे जानकारी
बिहान फ्रेश महसुस गर्नका लागि राती मिठो निन्द्रा लाग्न अत्यावश्यक छ । मानिसहरु सुत्नका लागि बेडमा पल्टिएपनि निकै बेरसम्म सुत्ने कसरत गरिरहेका हुन्छन् । यदि तपाईं पनि यहि सूचीमा पर्नुहुन्छ भने यी सजिलो तरिका अपनाएर मज्जाले निदाउन सक्नुहुन्छ । नियमित योग गर्नुहोस्ः योग गर्दा शरिरले आराम पाउँछ । साथै यसले तनाव पनि कम गर्दछ जसले तपाईंलाई मिठो निन्द्राको लागि सहयोग
कुन समयमा दही खानु स्वास्थ्यको लागि घातक हुन्छ ? सबैले जानी राख्नु पर्ने कुरा
दही स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक चीज हो यसमा कुनै शंका छैन। दहीमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ जसले दाँत तथा मांशपेशीमा रहेका हड्डीहरुलाई बलियो बनाउनुका साथै पाँचन प्रक्रियालाई समेत स्फूर्त बनाउने काम गर्दछ। खासमा दूधको उपयुक्त विकल्प दहीलाई नै मान्ने गरिन्छ। नियमित दही खानाले रोगप्रतिरोधात्म क्षमता बढ्ने र पेटलाई शीतलता प्रदान गर्दछ।तर दहीलाई सेवन गर्ने समय
यो न्यूरोफाइब्रोमटोटिस् रोगले भेटेपछि बाँच्ने सम्भावना हुन्छ कि हुदैन?
काठमाडौ । चार सन्तानका पिता बनिसकेका सुरिन्दर शर्मा आफ्नो शरिरलाई हजारौँ स–साना ट्युमरले कुरुप बनाइदिएपछि पुन आफ्नो सुन्दर शरिर फिर्ता हुने चामत्कारिक उपचारको आशामा बाँचिरहेका छन् । भारतीय ४६ वर्षीय शर्मालाई २० वर्षको उमेरदेखि नै अनुहारमा मासुको स–साना गाँठाहरु देखा पर्न थालेको र विस्तारै बढेर शरीरभरी ढाकेपछि छर–छिमेक र आफन्तको माझ घृर्णित बन्नुपरेको छ । मेडिकल
गर्भनिरोधक चक्की स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
अनिच्छुक गर्भधारणाबाट जोगिनका लागि बजारमा महिलाहरुले खाने धेरै किसिमका गर्भनिरोधक चक्कीहरु पाइन्छन । नचाहिने गर्भरहनबाट जोगिन यी चक्कीहरु महिलाहरुका लागि सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो माध्यम पनि मानिन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरुले यसको प्रयोग गर्नेक्रम बढदै गएको छ । तर हालै गरिएको एक अध्ययनले धेरै गर्भनिरोधक चक्कीको अधिक प्रयोग महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने देखाएको
क्यान्सर, फोक्सो र मुटु सम्बन्धी रोग,मधुमेह तथा कलेजोको रोग नङको रङबाट थाहा हुन्छ
डा. लालितकुमार मिश्र हातखुट्टाका नङको रङले मानिसको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा पूर्ण जानकारी गराउँछ । नङमा देखिने सेतो दाग, गुलाबीपन या धर्सो हुनुको अर्थ हो— शरीरमा कतै कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग अदृश्य रूपमा पलाइरहेको छ । कलेजो, मुटु, फोक्सो, छाला एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुराको प्रमाण व्याक्तिको नङबाट थाहा हुन्छ । नङको काम हातखुट्टाका औंलाको सौन्दर्य
यौन जिज्ञासा: भियग्राले कसरी सेक्स पावर बढाउछ ?
दुर्बलता कम गर्ने भियग्रा भनेको कस्तो खालको औषधि हो ? यसले कसरी यौन दुर्बलता कम गर्छ ? यसको सेवनले कुनै हानि हुन्छ कि हुँदैन ? -औषधि विज्ञानका विभिन्न आविष्कारमध्ये यो पनि लोकप्रिय आविष्कारमा पर्छ । भियग्राले यौन दुर्बलताका कारण चिन्तित एवं हीनताबोधले पीडित व्यक्तिलाई पुरुषत्व फर्काउन मद्दत गर्छ । नेपालजस्तो खुल्लापन नआइसकेको समाजमा यौनबारे छलफल गर्न गाह्रो छ । वीर्य